Fiandohana kely, vokatra goavana
"31 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy ka nanao hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny voan-tsinapy izay nalain’olona ka nafafiny tany an-tsahany; 32 fa kely noho ny voa rehetra izy, kanefa rehefa maniry, dia lehibe noho ny anana ka tonga hazo, dia avy ny voro-manidina ka mitoetra ao amin’ny rantsany.33 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny masirasira, izay nalain’ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin’ny koba intelon’ny famarana, mandra-pahazon’ny masirasira azy rehetra. 34 Fanoharana no nilazan’i Jesosy izany zavatra rehetra izany tamin’ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy, afa-tsy tamin’ny fanoharana, 35 mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: Hiloa-bava hilaza fanoharana Aho; Hanambara zavatra izay nafenina hatrizay nanorenana izao tontolo izao Aho." Matio 13:31-35
Ny fiandohan’ny toriteny nataon’i Jesosy Kristy tao Galilia (4:17) sy teo an-tendrombohitra (5:1-3) dia momba ny fanjakan’ny lanitra. Teto dia fanoharana no nentiny nampianarana izany lohahevitra izany (34-35) mba hanairana ny sain’ny mpihaino hikarokaroka sy hanakatra ny zava-miafina ara-panahy, hanavahana ny mpihaino tantara amin’ny mpandalina. Arakaraky ny fahatakarany no anomezany fampianarana lalindalina hatrany (Jaona 16:12).
Fiandohana kely, fiafarana goavana (31-32): Zava-maniry iray ihany io voa kely lasa hazo goavana be io; Andriamanitra no mampitombo sy mampivelatra azy tsikelikely (1 Korintianina 3:5-7). Tahaka izany koa, Andriamanitra ihany no mampivelatra ny fanjakan’ny lanitra, izay notokanana tamin’ny fahatongavana’i Jesosy Kristy. Natao tsinontsinona teo am-piandohana nefa lasa mahenika izao tontolo izao ankehitriny. Ny tantaran’ny nidiran’ny Filazantsara teto Madagasikara dia nanaraka izany modely izany: kely sady voahenjika tany am-piandohana nefa mitombo sy mivelatra ankehitriny.
Fanovana (33): Hevitra miiba no matetika ampiasan’ny Baiboly ny hoe «masirasira» (16:5, 1 Korintianina 5:6-8). Eto anefa izy dia milaza ny halalin’ny fiasan’ny Fanjakana miafina ao anatin’ny olombelona izay afaka manova avy ao anaty. Tsy mitombo ny masirasira fa miditra ao anatin’ny koba ary tsy voasakana ny fanovana entiny.
Fintina: Ny fanoharana ny amin’ny voantsinapy dia maneho fitomboana ivelany tsy hay tohaina fa ny masirasira kosa dia milaza fiovana anaty, hetsika miafina tsy azo sakanana. Tahaka izany ny herin’ny Filazantsara, kely no iaingany fa tsy voasakana ny fihitarany sy ny fivelarany, ary mahavariana ny fiovana entiny eo amin’ny fiainan’ny olona.
Teny Faneva: Rômanina 1:16 "Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin’ny Jiosy aloha, dia vao amin’ny jentilisa koa.",
Matio 5:13-16 "Hianareo no fanasin’ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahin’ny olona. Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin’ny vata famarana, fa apetrany eo amin’ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin’izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo imason’ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra.."